Ukholifulawa ukhilimu wekhari | Ukupheka Kwekhishi
Ukholifulawa ukhilimu wekhari
UMaria vazquez | 13/06/2021 10:00 | Ungadliwa Kwemifino
Uyayikhumbula iresiphi esiyilungiselele izolo? Okwe- Ukholifulawa nesaladi isaladi nge-apula Yini ayiphakamisile njengokugcwaliswa kwamasemishi namaswishi? Namuhla sisebenzisa enye ingxenye kakholifulawa ukwenza ukhilimu olula, olungele ukuphaka esidlweni sakusihlwa. A ukholifulawa kanye ukhilimu ukhari, emnandi.
Ukujwayelekile kwaleli khasi sekuvele kuyazi ukuthi ngicabanga ini ngokhilimu: babukeka njenge- insiza enkulu yokuqedela amadina. Futhi zilula kakhulu futhi ziyashesha ukuzilungiselela, ngaphandle kwezingxenye onquma ukuzenza. Ukholifulawa no-curry ukhilimu esiwenza namuhla akuhlukile, yizame!
Uma uthanda ukhari uzowuthanda lo khilimu. Uma ungajwayele ukusebenzisa lesi sinongo, noma kunjalo, ungahle uthande ukuzama ukwengeza okuncane okuncane kunenani eliboniswe kuresiphi. Ukwengeza okuningi, kuzohlala kunesikhathi! Ungayisebenzisa njengoba injalo noma ihambisane namanye ama-chickpeas amahle noma ilifti encane yokudla okunempilo.
Le ukholifulawa kanye no-ukhilimu ophekiwe uphelele ukuqedela ukudla kwakho kwansuku zonke. Ukhilimu olula futhi osheshayo wokulungiselela kepha unokunambitheka okuningi.
Isikhathi Ukupheka: 10 m
Onion anyanisi omhlophe
1 isigaxa sikagalikhi
½ ukholifulawa ngaphandle kwesiqu
1 ithisipuni lekhari
Tur isipuni turmeric
⅓ isipuni sikakhumini
Izingilazi ezi-2 zomhluzi wemifino noma amanzi
Sika u-anyanisi nogalikhi.
Sishisa uwoyela epanini futhi susa u-anyanisi nogalikhi ize eyokuqala iguquke.
Khona-ke sifaka ukholifulawa kuma-florets amancane bese upheka kuze kube nsundu kancane.
Ngemuva kwalokho sifaka izinongo futhi siyaxuba.
Ngemuva kwalokho, sithela izingilazi ezimbili zamanzi noma umhluzi wemifino - okufanele umboze imifino igeleze- futhi pheka imizuzu eyi-10.
Ngemuva kwemizuzu eyi-10, gaya bese ukhonza, ukholifulawa no-curry cream, kuyashisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ungadliwa Kwemifino » Ukholifulawa ukhilimu wekhari
I-pasta enesipinashi noshizi wesosi